टेलिफोनबाट कृषकको समस्या समाधान गरिरहेका छौँ : कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख निर्मल गदाल - eagronews.com
By eagronews ३ बैशाख २०७७, बुधबार १२:०१
कृषि ज्ञान केन्द्रले अहिले के काम गरिरहेको छ ?
स्थिति अहिले निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । तै पनि हामीले निकै सचेतनासाथ काम गरिरहेका छौँ । सरकारले गोष्ठी, सेमिनार गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैले त्यस्तो काम गर्ने कुरा भएन । भिडभाड गर्ने कुनै पनि काम गरेका छैनौँ । कार्यालयमा पनि आवश्यक सङ्ख्यामा गइरहेका छौँ । हामीले टेलिफोनबाट पनि किसानको लागि आवश्यक कामहरू गरिरहेका छौँ । त्यसको लागि हामीले कुन कामको लागि को सँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ भनेर मसहित ज्ञान केन्द्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूको मोबाइल नं नै दिएका छौँ । किसानहरूले पनि त्यही अनुसार सम्पर्क गर्ने गर्नु भएको छ ।
हामीले गरिरहेको अर्को काम स्थानीय तहका अधिकारीहरुसंग समन्वय र सम्पर्क पनि हो । काठमाडौँ उपत्यका भित्रका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर कहाँ के आवश्यक छ, हामीले कहाँनेर सहजीकरण गर्दा किसान र कृषि उद्यमीलाई सहज हुन्छ भनेर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
खासगरि तरकारीका किसानहरूको बिचल्ली भएको देखिदैंछ, यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
लकडाउन सुरु भएपछि सरकारले सुरुमा खाद्य आपूर्तिलाई जोड दिएको थियो । कम्तीमा प्रमुख खानेकुरा पाएपछि जनजीवन केही हदसम्म सहज हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाई थियो । र, वास्तवमा त्यो हो पनि । सबैभन्दा पहिले चामल, दाल, तेल जस्ता खाद्य पदार्थहरूको आपूर्ति भएमा मानिस भोको हुनु पर्दैन भन्ने सरकारी सोचाई अनुसार त्यो व्यवस्थित भएपछि अहिले सरकारले अन्य कृषि उपजको बजारीकरणलाई पनि सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । त्यही अनुसार कृषि उपजको ढुवानी र खरिद विक्रीमा अवरोध गरेको छैन । त्यसैले किसानले चुनौतीहरूका बाबजुद पनि उपत्यका भित्रका किसानले समान कुहाउनु पर्ने वा सडकमा फाल्नु पर्ने अवस्था छैन ।
निश्चय पनि समस्या हरेक क्षेत्रमा छ । काठमाडौँ उपत्यकामा चैते धानको खेती खासै हुँदैन । त्यसैले त्यो लगाउन पाइएन वा कुनै असजिलो भयो भन्ने अवस्था छैन । तर, वर्षे धानको लागि बीउ राख्ने बेला भयो, वर्षे तरकारी लगाउने बेला भयो । ग्रिन हाउस तयार गर्ने बेलामा त्यसको सामाग्री कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । किनकि पसलहरू बन्द छन्, खुला भए पनि पहिले जस्तो पसल जान र ल्याउन पक्कै सजिलो छैन । त्यसमाथि पसलहरूमा भारत वा चीनबाट आउनु पर्ने समानहरू पनि आइरहेका छैनन् । ग्रिन हाउसको लागि तराईबाट बाँस ल्याउनु पर्छ । तर, बाँस आउन सकेको छैन । हामी आफैले उपत्यका भित्र करिब १० हजार ग्रिन हाउस बनाउने भनेका थियौँ । त्यो नै के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने अवस्था छ । अझै २,४ दिन यो समस्या रह्यो भने ठुलो समस्या नहोला, तर त्यो पनि पर अझै लम्बियो भने चाही अफ्ठेरो नपर्ला भन्न सकिँदैन ।
पहिले निर्धारित कार्यक्रमहरू त नहुने भए नि, अब होइन ? त्यसको लागि छुट्ट्याइएको बजेट के गर्नुहुन्छ ?
गोष्ठी, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू नहुने नै भयो । कोरोनाको सन्त्रास फैलने बित्तिकै सरकारले त्यसलाई रोक लगाइसकेको छ । हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका धेरै कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ । केही कार्यक्रमहरू चाही चलिरहेका थिए । लामो समय काम हुन सकेन भने के गर्ने भन्ने बारेमा पनि सङ्घीय वा प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ । मेरो व्यक्तिगत धारणामा चाही अब सरकारी कार्यक्रमहरू साना किसान र छिटो उत्पादन हुने बालीहरूमा केन्द्रित हुनु पर्छ । सरकारले खर्च पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरूको लागि गर्नुपर्छ ।
बाली स्याहार्दै किसान